Ama-canvas Prints | Igalari ye-ROYI ART
Umdwebo wobuciko owenziwe ngezandla
Isithombe ku-Art Painting
Wood Stretcher Uzimele
Iphepha lesilika elenziwe ngezandla
Isendlalelo sezithombe zesengezo
Ngokuqiniseka kwe-100% Ukwaneliseka kanye nesitolo esiku-inthanethi esiphephile, manje usungathenga amaPanvas Prints asezingeni eliphansi kanye nempahla ngokuzethemba.
Amaphrinta ethu we-canvas adalwe ngobuchwepheshe bamuva bokuphrinta bedijithali abaphephile bemvelo nabanephunga mahhala. Ibanga lokulondolozwa kwama-inks esilisebenzisayo likhiqiza uguquko olubukhali nolunempilo lube yichibi elihlanganisiwe lekotini elihlanganisiwe futhi elingaqinile ukumelana.
Izingcweti ezaziyo zizokuxwayisa kude nabaphrinta be-laser futhi zikuqondise emikhiqizweni ye-inkjet. Njengomthetho ojwayelekile wesithupha, u-Epson, HP, noRoland yibo abaqhudelana ngokuyinhloko. Kodwa-ke, ngisho naphakathi kwale mikhiqizo nemishini yabo, kukhona umehluko.
Zonke izintambo zephaneli zeluliwe futhi zilungele ukulenga kusetshenziswa uzinzo oluqinile, futhi izingodo eziphephile nemvelo zisebenza ngezinto ezihlanganisa cishe amasentimitha ayi-3.5.
Uma isebenzisa udayi osuselwe kumanzi, kukhona ithuba elihle lokuthi isithombe sakho sizothola ezinye izinguquko ongeke wazazisa. Ngomsebenzi wakho wobuciko, kuyakhokhela ukutshala imali kudayi asuselwe ku-pigment angavunyelwa manzi. Iningi lale mikhiqizo alupheli ngokuvezwa kwe-UV, okubalulekile lapho ufuna ubuciko bakho ukuthi buqhubeke esikhathini esedlule leminyaka noma leminyaka.
Guqula izithombe zakho ukuze zibambe nge-Royi Art.
Izithombe zethu kumashaneli zilungele ukuhlobisa ikhaya lakho noma ihhovisi, futhi ziphelele njengezipho zezithombe.
Xhumana nathi namuhla futhi omunye wochwepheshe bethu uzokwabelwa i-akhawunti yakho futhi axhumane nawe kungekudala.
Silungele ukukusiza nganoma imuphi umbuzo noma isicelo.
I-ROYI ART GALLERY
© Copyright @ 2020 Royi Art Gallery. Wonke Amalungelo Agodliwe. Okufakiwe Products , i- Ibalazwe , i- Hambayo Site
Libhala uhlaka , Contemporary Amafutha Painting , Abstract Amafutha Painting , Oil Painting , Ezenziwe Ngesandla Amafutha Painting , i-Oyili Painting On Canvas , i- Zonke Imikhiqizo